I-Las vegas unzip
Umbuzo I-Las vegas unzip
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #769 by inja
Sawubona, ulayishe i-LV kuma-PC ahlukene we-3 (i-4.05GB ehlanganisiwe). Ukusebenzisa i-Winrar ihluleka ukukhipha amafayela we-6x.tiz kanye nefayela le-1x.exe. Esikhathini ngasinye ukuthi ingobo yomlando inonakele noma iqukethe izinhlobo zefayela ezingaziwa. Ingabe omunye u-unzipper ungaphumelela kakhulu? Uma kunjalo, yikuphi, sicela?
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #770 by Dariussssss
Sawubona futhi wamukelekile eRikoooo. Ungakwazi ukuthumela lokhu ngaphansi FSX,FSX Isithangami esingezansi se-Steam? Lesi sihloko senzelwe amalungu e-Rikoooo Forum ukuthi azethule.
Nakulokhu futhi, bamukelekile.
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #772 by inja
iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 2 izinyanga ezedlule #773 by rikoooo
Ngiphumelele ukuhlangabezana nalolu daba futhi, ngilutholile ngokuxazulula ngokusebenzisa i-Izarc:
Landa futhi ufake i-freeware Izarc www.izarc.org/ ke uchofoze ngakwesokudla ku-archive khetha "Izarc" futhi "Khipha ku-las_vegas_mega_photoreal_scenery"
Ngisanda kulayishwa ingobo yomlando entsha ku-Rikoooo ngakho kungakapheli amahora ambalwa kuzobekwa kunoma ubani.
Uxolo ngenxa yokuphazamiseka, akulula ukubhekana namafayela amakhulu,
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: inja
Isikhathi ukudala page: 0.208 imizuzwana